စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၆) - Myanmar Network
စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၆)
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on January 23, 2014 at 17:20 in သုတ/ရသ ဆောင်းပါးများ
အပြောစွမ်းရည်ကို စစ်ဆေးသော စာမေးပွဲများ (Speaking Exams)
ဒီကဏ္ဍမှာတော့ ကျောင်းသားအများစု ကြောက်ကြတဲ့ အပြောစွမ်းရည်ကို စစ်ဆေးတဲ့ စာမေးပွဲများ (Speaking exams)ဖြေဆိုနိုင်ရန် ပြင်ဆင်ရာတွင် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမဲ့ အကြံပြုချက်များကို တင်ပြမှာဖြစ်ပါ တယ်။ ဒီအကြံ ပြုချက်တွေဟာ သင့်ကို ဘယ် speaking exam မှာ မဆို ဖြစ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်နိုင်ရန် အကူအညီပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ စာမေးပွဲတွေမှာ အထူးသဖြင့် နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲတွေမှာ စိတ်လှုပ်ရှား တတ်ကြတာ ဓမ္မတာပါ။ ယခုဖော်ပြမဲ့ အကြံပြုချက်တွေကတော့ နှုတ်ဖြေ ဖြေတဲ့အခါ သင့်ကိုယ်သင် ပိုပြီး ယုံကြည်ချက်ရှိ အောင်ကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်စကားကို တတ်နိုင်သမျှ နားထောင်ခြင်းသည် သင့်ရဲ့အပြောစွမ်းရည်ကို တိုးတက်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အင်္ဂလိပ်သီချင်းတွေ၊ podcast တွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေ၊ ရုပ်မြင်သင်ကြား အစီအစဉ်တွေ၊ ဇာတ်လမ်းတွဲ တွေ၊ ဗွီဒီယိုခွေတွေကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် စကားပြောတဲ့အခါ ယုံကြည်ချက်ပိုရှိစေပါတယ်။
စာသင်ခန်းထဲမှာ English လို တတ်နိုင်သမျှ ပြောပါ။ အတန်းထဲမှာ English ကို မှန်မှန်ပြောသွားတဲ့အတွက် စာမေးပွဲရောက်ရင် ပြောရတာလွယ်ကူပါလိမ့်မည်။
ပြိုင်ပွဲမဟုတ်တဲ့အတွက် ဖြေးဖြေးပြောပါ။ မပြောခင် ဘာပြောရမလဲဆိုတာကို သေသေချာချာ စဉ်းစားပြီး ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး ဖြေးဖြေးပြောပါ။
မှန်တယ်လို့ သင် သိထားတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို သုံးပါ။ ယခင်က သင်ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ စကားလုံးတွေ၊ အသုံးအနှုန်းတွေကို သုံးပါ။
စကားလုံးတစ်လုံးကို သိပေမဲ့ မမှတ်မိဖူးဆိုရင် တခြားနည်းဖြင့်ပြောပါ။ ဥပမာ-သင့်အနေဖြင့် “expensive” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သိပေမဲ့ “cheap” ကို မသိရင် အောက်ပါကဲ့သို့သော တခြားနည်းဖြင့် ပြောပါ။
- It’s not expensive. (ဒါကတော့ ဈေးမကြီးပါ။)
- It’sagood price. (ဈေးနှုန်းသင့်တင့်ပါတယ်။)
- It’s notalot of money. (ငွေအများကြီး မကျပါဘူး။)
စကားပြောရင်းနဲ့ သင့်ကိုယ်သင် နားထောင်ပါ။ အမှားပါသွားရင် ပြင်ပါ။ ဒေသခံ စကားပြောသူ တွေတောင်မှ အမှားလုပ်ကြပြီး အမြဲပဲ ပြင်နေကြရတာပါ။
စကားပြောတဲ့အခါ စာစစ်သူရဲ့ (သို့) တစ်ဖက်က ကျောင်းသားရဲ့မျက်နှာကို ကြည့်ပြောပါ။ သူတို့ သင်ပြောနေတာတွေကို နားလည်ရဲ့လား? မလည်ဘူးဆိုရင် တခြားစကားလုံးတွေ သုံးပြီးနောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ပြောပါ။
မေးခွန်း(သို့) လုပ်ငန်းကို နားမလည်ပါက ဆရာကို မေးပါ။ မေးတဲ့အခါမှာ “Could you repeat that, please?” (ကျေးဇူးပြုပြီးနောက်တစ်ခါ ပြန်ပြောပြပါလား?) ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
“Yes” (သို့) “No”လို့ပဲ တုံးတိမဖြေပါနှင့်။ ကျိုးကြောင်း ဆက်စပ်ပြီးဖြေပါ။ “Yes, I agree because….” (ဟုတ်ကဲ့………ကြောင့် သဘောတူပါတယ်လို့ ပြောပါ။)
သင့်အနေနဲ့ မေးခွန်း (သို့) အကြောင်းအရာကို ရွေးချယ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင် သင်သိပြီးသားအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်တာကို ရွေးပါ။ ကိုယ်သတိထားတဲ့အကြောင်းအရာကို ပြောရတာက ပိုပြီး လွယ်ကူပါတယ်။
စစ်ဆေးသူကြားနိုင်အောင် စကားကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါ။ ဒီလိုပြောရတာ ခက်နေမယ်ဆိုရင် အိမ်မှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ လေ့ကျင့်ပါ။ အခန်းတစ်ခန်းရဲ့ ဟိုဘက်၊ ဒီဘက်မှာ ရပ်ပြီး အချင်းချင်း အင်္ဂလိပ်လို ပြောပါ။ (သို့) ကွန်ပျူတာကနေတဆင့် အချင်းချင်း အင်္ဂလိပ်လိုပြောပါ။
စာမေးပွဲ မတိုင်ခင် ဘာတွေကို ပြင်ဆင်ထားနိုင်သလဲ? ဆရာ့အား မေးပါ။ ဥပမာ-ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းတွေ။ ဘာပြောရမလဲဆိုတာကို အိမ်မှာ လေ့ကျင့်ပါ။ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မှန်ရှေ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် လက်ကိုင်ဖုန်း (သို့) ကွန်ပျူတာထဲမှာ အသံ သွင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပါ။
တချို့ စာမေးပွဲတွေမှာ စစ်ဆေးသူ (၂)ဦးပါတတ်ပါတယ်။ သင့်ကို မေးမြန်းသူ တစ်ဦးနဲ့ သင့်အပြောကို နားထောင်သူ တစ်ဦးတို့ဖြစ်ပါတယ်။ အ၀င်မှာ “hello” နဲ့ အပြန်မှာ “good-bye”ဆိုတဲ့ စကားတွေနဲ့ (၂)ဦးစလုံးကို နှုတ်ဆက်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့ စာမေးပွဲဖြေဆိုနေစဉ်အတွင်းမှာတော့ သင့်ကို မေးမြန်းနေတဲ့သူကိုပဲ အာရုံစိုက်ပါ။
ဒီအချိန်ဟာ သင်သိထားတာတွေကို စစ်ဆေးသူအား ပြသနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့ အကောင်းဆုံး စကားအသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ အသံထွက်တွေကို အသုံးပြုပြီး ဖြေဆိုပါ။
စာမေးပွဲဖြေရတဲ့အခါ စိတ်မလှုပ်ရှားတဲ့ သူဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် စာမေးပွဲ မဖြေခင် အသက်ကို ပြင်းပြင်း ၄-၅ ခါ ရှုသွင်းပြီး စိတ်ကို ကြိုးစားပြီး လျော့ထားပါ။
မှတ်ထားရမဲ့ နောက်ဆုံးအချက်တစ်ချက်ကတော့ စာစစ်သူတွေဟာ ဂြိုဟ်သား (aliens)တွေ မဟုတ်ဘဲ သာမာန်လူသားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။
ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းများ (Communication Strategies)
ဒီကဏ္ဍမှာတော့ speaking exam အတွက် ပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ အထောက်အကူဖြစ်စေမဲ့ လက်တွေ့ ကျတဲ့ အကြံပြုချက်တွေနဲ့ စကားအသုံးအနှုန်းတို့ကို ဖော်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာစစ်သူအနေဖြင့် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုတဲ့အခါမှာ သင့်အပြောစွမ်းရည်သည် အပြစ်ပြောစရာ မရှိအောင် ကောင်းနေမယ် (သို့) စာမေးပွဲ ဖြေနိုင်ဖို့ အတွက် သိသင့်တဲ့ စကားလုံးအားလုံးကို သိထားလိမ့်မယ်ဆိုပြီး မျှော်လင့်ထားမှာ မဟုတ်ပါ။
သို့ရာတွင် သိသင့်တဲ့ စကားလုံးအားလုံးကို မသိထားရင်တော့လည်း ဒီလိုအခြေအနေမှာ အထောက်အကူ ဖြစ်စေမဲ့ စကားအသုံးအနှုန်းကို ပြောနိုင်ဖို့ရာ ကြိုတင်စီစဉ်မှုတော့ ရှိထားသင့်ပါတယ်။
စကားလုံးအတိအကျကို မသိသောအခါ (When you don’t know an exact word)
တိကျတဲ့ စကားလုံးတစ်လုံးကို မသိတဲ့အခါ မမှတ်မိနိုင်တဲ့အခါ စိတ်မပူပါနှင့်။ ဒီစကားလုံးမပါဘဲ ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ အခြား နည်းလမ်းတွေရှိပါသေးတယ်။ အခုဖော်ပြမဲ့ နည်းလမ်းတွေက အသုံးဝင်ပြီး ဒေသခံစကားပြောသူတွေကတောင်မှ အသုံးပြုကြပါတယ်။
ယေဘုယျကျသော စကားလုံးများ(General words)
အကယ်၍ သင့်အနေနဲ့ surgeon (ခွဲစိတ်ဆရာဝန်) ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မမှတ်မိပါက ပိုပြီး ယေဘုယျကျတဲ့ doctor(ဆရာဝန်)ဆိုတာကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ cutlery (စားပွဲတင်ဇွန်း၊ ခက်ရင်း၊ ပန်းကန်ပြား စသည်) တို့ကို မေ့နေရင် ၄င်းအစား knife (ဓါး)၊ fork (ခက်ရင်း)နှင့် spoon (ဇွန်း)ဆိုပြီး တစ်ခုချင်းစီရဲ့ အမည် စကားလုံးတွေကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
သရုပ်ဖော်ရေးသားနိုင်သော ပြန်ညွှန်းဝါကျကဏ္ဍများ (Relative clauses to giveadescription)
It’saperson who…………(အဲဒါကတော့ ……. သောလူဖြစ်ပါတယ်)
It’sathing……….(အဲဒါကတော့ ……သောအရာဝတ္ထုဖြစ်ပါတယ်)
It’saplace………….(အဲဒါကတော့………သော နေရာဖြစ်ပါတယ်)
အစရှိသော ၀ါကျပုံစံတွေကို သုံးပြီး သင်ပြောလိုတဲ့ စကားလုံးကို သရုပ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ - သင့်အနေနဲ့ briefcase (ရုံးသုံးလက်စွဲအိတ်)ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မေ့နေပါက “It’sathing that people use to carry papers to work” (အဲဒါကတော့ စာရွက်စာတမ်းတွေထည့်ပြီး ရုံးကို သယ်သွားတဲ့အရာ ၀တ္ထုဖြစ်ပါတယ်) လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
အသုံးဝင်မှုကို ဖော်ပြခြင်း (Describe the purpose or function)
သင့်အနေဖြင့် “scissors” (ကတ်ကြေး)ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မသိပါက အောက်ပါ ၀ါကျပုံစံဖြင့် သရုပ်ဖော်ပြောပြ နိုင်ပါတယ်။
“They are used to cut paper” (သို့) “They are used for cutting paper.” (၄င်းတို့ကို စက္ကူညှပ်ရန် အတွက် အသုံးပြုပါတယ်။)
ဒီနည်းကတော့ တိကျတဲ့ အသုံးဝင်မှုရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေအတွက် အသုံးဝင်ပါတယ်။
ကြောင်းတူ သံကွဲများ (Synonyms)
“Tiny” (အလွန်သေးကွေးသော)ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မေ့နေပါက “very small (အလွန်သေးငယ်သော) ဟူ၍ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းကတော့ နာမ်(nouns)တွေနှင့် နာမ၀ိသေသနများ (adjectives)အတွက် အလွန်သင့်တော် ပါတယ်။
ဆန့်ကျင်ဖက် စကားလုံးများ (Antonyms)
Weak (အားနည်းသော)ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မသိပါက “not strong” (မသန်မာသော)ဟု ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်း ကလည်း adjectives တွေနဲ့ အထူးဆီလျော်ပါတယ်။
အနီးစပ်ဆုံး ခန့်မှန်းချက်များ (Approximations)
အနီးစပ်ဆုံးခန့်မှန်းပြောတဲ့အခါ အောက်ပါဝါကျပုံစံများကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
It’sakind of ………(…………..ကဲ့သို့သော အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်)
It’sasort of……………….(………………….ကဲ့သို့သော အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။)
ဥပမာ bungalow (တစ်ထပ်အိမ်)ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အစဖော်မရပါက
“It’sakind ofahouse.” (အိမ်ကဲ့သို့သော အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်)ဟူ၍ ပြောနိုင်ပါတယ်။
စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁)
စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၂)
စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၃)
စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၄)
စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၅)
စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၇)
စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၈)
စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၉)
စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၀)
စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၁)
စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၂)
စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၃)
စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၄)
စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၅)
စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၆)
စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၇)
စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၈)
စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၉)
စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၂၀)
အပွောစှမျးရညျကို စဈဆေးသော စာမေးပှဲမြား (Speaking Exams)
ဒီကဏ်ဍမှာတော့ ကြောငျးသားအမြားစု ကွောကျကွတဲ့ အပွောစှမျးရညျကို စဈဆေးတဲ့ စာမေးပှဲမြား (Speaking exams)ဖွဆေိုနိုငျရနျ ပွငျဆငျရာတှငျ အထောကျအပံ့ဖွဈစမေဲ့ အကွံပွုခကျြမြားကို တငျပွမှာဖွဈပါ တယျ။ ဒီအကွံ ပွုခကျြတှဟော သငျ့ကို ဘယျ speaking exam မှာ မဆို ဖွဈနိုငျသမြှ အကောငျးဆုံး စှမျးဆောငျနိုငျရနျ အကူအညီပေးမှာ ဖွဈပါတယျ။ လူတိုငျးဟာ စာမေးပှဲတှမှော အထူးသဖွငျ့ နှုတျဖွစောမေးပှဲတှမှော စိတျလှုပျရှား တတျကွတာ ဓမ်မတာပါ။ ယခုဖျောပွမဲ့ အကွံပွုခကျြတှကေတော့ နှုတျဖွေ ဖွတေဲ့အခါ သငျ့ကိုယျသငျ ပိုပွီး ယုံကွညျခကျြရှိ အောငျကူညီပေးမှာဖွဈပါတယျ။
အင်ျဂလိပျစကားကို တတျနိုငျသမြှ နားထောငျခွငျးသညျ သငျ့ရဲ့အပွောစှမျးရညျကို တိုးတကျစပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အင်ျဂလိပျသီခငျြးတှေ၊ podcast တှေ၊ ရုပျရှငျတှေ၊ ရုပျမွငျသငျကွား အစီအစဉျတှေ၊ ဇာတျလမျးတှဲ တှေ၊ ဗှီဒီယိုခှတှေကေို ကွညျ့ခွငျးဖွငျ့ စကားပွောတဲ့အခါ ယုံကွညျခကျြပိုရှိစပေါတယျ။
စာသငျခနျးထဲမှာ English လို တတျနိုငျသမြှ ပွောပါ။ အတနျးထဲမှာ English ကို မှနျမှနျပွောသှားတဲ့အတှကျ စာမေးပှဲရောကျရငျ ပွောရတာလှယျကူပါလိမျ့မညျ။
ပွိုငျပှဲမဟုတျတဲ့အတှကျ ဖွေးဖွေးပွောပါ။ မပွောခငျ ဘာပွောရမလဲဆိုတာကို သသေခြောခြာ စဉျးစားပွီး ပုံမှနျထကျပိုပွီး ဖွေးဖွေးပွောပါ။
မှနျတယျလို့ သငျ သိထားတဲ့ အသုံးအနှုနျးကို သုံးပါ။ ယခငျက သငျပွောခဲ့ဖူးတဲ့ စကားလုံးတှေ၊ အသုံးအနှုနျးတှကေို သုံးပါ။
စကားလုံးတဈလုံးကို သိပမေဲ့ မမှတျမိဖူးဆိုရငျ တခွားနညျးဖွငျ့ပွောပါ။ ဥပမာ-သငျ့အနဖွေငျ့ “expensive” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သိပမေဲ့ “cheap” ကို မသိရငျ အောကျပါကဲ့သို့သော တခွားနညျးဖွငျ့ ပွောပါ။
- It’s not expensive. (ဒါကတော့ ဈေးမကွီးပါ။)
- It’sagood price. (ဈေးနှုနျးသငျ့တငျ့ပါတယျ။)
- It’s notalot of money. (ငှအေမြားကွီး မကပြါဘူး။)
စကားပွောရငျးနဲ့ သငျ့ကိုယျသငျ နားထောငျပါ။ အမှားပါသှားရငျ ပွငျပါ။ ဒသေခံ စကားပွောသူ တှတေောငျမှ အမှားလုပျကွပွီး အမွဲပဲ ပွငျနကွေရတာပါ။
စကားပွောတဲ့အခါ စာစဈသူရဲ့ (သို့) တဈဖကျက ကြောငျးသားရဲ့မကျြနှာကို ကွညျ့ပွောပါ။ သူတို့ သငျပွောနတောတှကေို နားလညျရဲ့လား? မလညျဘူးဆိုရငျ တခွားစကားလုံးတှေ သုံးပွီးနောကျတဈကွိမျ ပွနျပွောပါ။
မေးခှနျး(သို့) လုပျငနျးကို နားမလညျပါက ဆရာကို မေးပါ။ မေးတဲ့အခါမှာ “Could you repeat that, please?” (ကြေးဇူးပွုပွီးနောကျတဈခါ ပွနျပွောပွပါလား?) ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုနျးကို သုံးနိုငျပါတယျ။
“Yes” (သို့) “No”လို့ပဲ တုံးတိမဖွပေါနှငျ့။ ကြိုးကွောငျး ဆကျစပျပွီးဖွပေါ။ “Yes, I agree because….” (ဟုတျကဲ့………ကွောငျ့ သဘောတူပါတယျလို့ ပွောပါ။)
သငျ့အနနေဲ့ မေးခှနျး (သို့) အကွောငျးအရာကို ရှေးခယျြခှငျ့ရမယျဆိုရငျ သငျသိပွီးသားအကွောငျးအရာနှငျ့ ပတျသကျတာကို ရှေးပါ။ ကိုယျသတိထားတဲ့အကွောငျးအရာကို ပွောရတာက ပိုပွီး လှယျကူပါတယျ။
စဈဆေးသူကွားနိုငျအောငျ စကားကို ရှငျးရှငျးလငျးလငျးပွောပါ။ ဒီလိုပွောရတာ ခကျနမေယျဆိုရငျ အိမျမှာ သူငယျခငျြးတဈယောကျယောကျနဲ့ လကေ့ငျြ့ပါ။ အခနျးတဈခနျးရဲ့ ဟိုဘကျ၊ ဒီဘကျမှာ ရပျပွီး အခငျြးခငျြး အင်ျဂလိပျလို ပွောပါ။ (သို့) ကှနျပြူတာကနတေဆငျ့ အခငျြးခငျြး အင်ျဂလိပျလိုပွောပါ။
စာမေးပှဲ မတိုငျခငျ ဘာတှကေို ပွငျဆငျထားနိုငျသလဲ? ဆရာ့အား မေးပါ။ ဥပမာ-ကိုယျရေးကိုယျတာ အခကျြအလကျတှနေဲ့ပတျသကျတဲ့ မေးခှနျးတှေ။ ဘာပွောရမလဲဆိုတာကို အိမျမှာ လကေ့ငျြ့ပါ။ သူငယျခငျြး တဈယောကျယောကျနဲ့ပဲဖွဈဖွဈ၊ မှနျရှမှေ့ာပဲဖွဈဖွဈ ဒါမှမဟုတျ လကျကိုငျဖုနျး (သို့) ကှနျပြူတာထဲမှာ အသံ သှငျးတာပဲဖွဈဖွဈလုပျပါ။
တခြို့ စာမေးပှဲတှမှော စဈဆေးသူ (၂)ဦးပါတတျပါတယျ။ သငျ့ကို မေးမွနျးသူ တဈဦးနဲ့ သငျ့အပွောကို နားထောငျသူ တဈဦးတို့ဖွဈပါတယျ။ အဝငျမှာ “hello” နဲ့ အပွနျမှာ “good-bye”ဆိုတဲ့ စကားတှနေဲ့ (၂)ဦးစလုံးကို နှုတျဆကျရမှာဖွဈပမေဲ့ စာမေးပှဲဖွဆေိုနစေဉျအတှငျးမှာတော့ သငျ့ကို မေးမွနျးနတေဲ့သူကိုပဲ အာရုံစိုကျပါ။
ဒီအခြိနျဟာ သငျသိထားတာတှကေို စဈဆေးသူအား ပွသနိုငျတဲ့ အခှငျ့အရေးဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သငျ့ရဲ့ အကောငျးဆုံး စကားအသုံးအနှုနျးတှနေဲ့ အသံထှကျတှကေို အသုံးပွုပွီး ဖွဆေိုပါ။
စာမေးပှဲဖွရေတဲ့အခါ စိတျမလှုပျရှားတဲ့ သူဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ စာမေးပှဲ မဖွခေငျ အသကျကို ပွငျးပွငျး ၄-၅ ခါ ရှုသှငျးပွီး စိတျကို ကွိုးစားပွီး လြော့ထားပါ။
မှတျထားရမဲ့ နောကျဆုံးအခကျြတဈခကျြကတော့ စာစဈသူတှဟော ဂွိုဟျသား (aliens)တှေ မဟုတျဘဲ သာမာနျလူသားတှဖွေဈတယျဆိုတာပါပဲ။
ဆကျသှယျရေးနညျးလမျးမြား (Communication Strategies)
ဒီကဏ်ဍမှာတော့ speaking exam အတှကျ ပွငျဆငျမှုပွုလုပျတဲ့အခါမှာ အထောကျအကူဖွဈစမေဲ့ လကျတှေ့ ကတြဲ့ အကွံပွုခကျြတှနေဲ့ စကားအသုံးအနှုနျးတို့ကို ဖျောပွသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ စာစဈသူအနဖွေငျ့ စာမေးပှဲ ဖွဆေိုတဲ့အခါမှာ သငျ့အပွောစှမျးရညျသညျ အပွဈပွောစရာ မရှိအောငျ ကောငျးနမေယျ (သို့) စာမေးပှဲ ဖွနေိုငျဖို့ အတှကျ သိသငျ့တဲ့ စကားလုံးအားလုံးကို သိထားလိမျ့မယျဆိုပွီး မြှျောလငျ့ထားမှာ မဟုတျပါ။
သို့ရာတှငျ သိသငျ့တဲ့ စကားလုံးအားလုံးကို မသိထားရငျတော့လညျး ဒီလိုအခွအေနမှော အထောကျအကူ ဖွဈစမေဲ့ စကားအသုံးအနှုနျးကို ပွောနိုငျဖို့ရာ ကွိုတငျစီစဉျမှုတော့ ရှိထားသငျ့ပါတယျ။
စကားလုံးအတိအကကြို မသိသောအခါ (When you don’t know an exact word)
တိကတြဲ့ စကားလုံးတဈလုံးကို မသိတဲ့အခါ မမှတျမိနိုငျတဲ့အခါ စိတျမပူပါနှငျ့။ ဒီစကားလုံးမပါဘဲ ဆကျသှယျနိုငျတဲ့ အခွား နညျးလမျးတှရှေိပါသေးတယျ။ အခုဖျောပွမဲ့ နညျးလမျးတှကေ အသုံးဝငျပွီး ဒသေခံစကားပွောသူတှကေတောငျမှ အသုံးပွုကွပါတယျ။
ယဘေုယကြသြော စကားလုံးမြား(General words)
အကယျ၍ သငျ့အနနေဲ့ surgeon (ခှဲစိတျဆရာဝနျ) ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မမှတျမိပါက ပိုပွီး ယဘေုယကြတြဲ့ doctor(ဆရာဝနျ)ဆိုတာကို အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ အကယျ၍ cutlery (စားပှဲတငျဇှနျး၊ ခကျရငျး၊ ပနျးကနျပွား စသညျ) တို့ကို မနေ့ရေငျ ၎င်းငျးအစား knife (ဓါး)၊ fork (ခကျရငျး)နှငျ့ spoon (ဇှနျး)ဆိုပွီး တဈခုခငျြးစီရဲ့ အမညျ စကားလုံးတှကေို အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
သရုပျဖျောရေးသားနိုငျသော ပွနျညှနျးဝါကကြဏ်ဍမြား (Relative clauses to giveadescription)
It’saperson who…………(အဲဒါကတော့ ……. သောလူဖွဈပါတယျ)
It’sathing……….(အဲဒါကတော့ ……သောအရာဝတ်ထုဖွဈပါတယျ)
It’saplace………….(အဲဒါကတော့………သော နရောဖွဈပါတယျ)
အစရှိသော ဝါကပြုံစံတှကေို သုံးပွီး သငျပွောလိုတဲ့ စကားလုံးကို သရုပျဖျောပွောဆိုနိုငျပါတယျ။
ဥပမာ - သငျ့အနနေဲ့ briefcase (ရုံးသုံးလကျစှဲအိတျ)ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မနေ့ပေါက “It’sathing that people use to carry papers to work” (အဲဒါကတော့ စာရှကျစာတမျးတှထေညျ့ပွီး ရုံးကို သယျသှားတဲ့အရာ ဝတ်ထုဖွဈပါတယျ) လို့ ပွောနိုငျပါတယျ။
အသုံးဝငျမှုကို ဖျောပွခွငျး (Describe the purpose or function)
သငျ့အနဖွေငျ့ “scissors” (ကတျကွေး)ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မသိပါက အောကျပါ ဝါကပြုံစံဖွငျ့ သရုပျဖျောပွောပွ နိုငျပါတယျ။
“They are used to cut paper” (သို့) “They are used for cutting paper.” (၎င်းငျးတို့ကို စက်ကူညှပျရနျ အတှကျ အသုံးပွုပါတယျ။)
ဒီနညျးကတော့ တိကတြဲ့ အသုံးဝငျမှုရှိတဲ့ ပစ်စညျးတှအေတှကျ အသုံးဝငျပါတယျ။
ကွောငျးတူ သံကှဲမြား (Synonyms)
“Tiny” (အလှနျသေးကှေးသော)ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မနေ့ပေါက “very small (အလှနျသေးငယျသော) ဟူ၍ သုံးနိုငျပါတယျ။ ဒီနညျးကတော့ နာမျ(nouns)တှနှေငျ့ နာမဝိသသေနမြား (adjectives)အတှကျ အလှနျသငျ့တျော ပါတယျ။
ဆနျ့ကငျြဖကျ စကားလုံးမြား (Antonyms)
Weak (အားနညျးသော)ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မသိပါက “not strong” (မသနျမာသော)ဟု ပွောနိုငျပါတယျ။ ဒီနညျး ကလညျး adjectives တှနေဲ့ အထူးဆီလြျောပါတယျ။
အနီးစပျဆုံး ခနျ့မှနျးခကျြမြား (Approximations)
အနီးစပျဆုံးခနျ့မှနျးပွောတဲ့အခါ အောကျပါဝါကပြုံစံမြားကို သုံးနိုငျပါတယျ။
It’sakind of ………(…………..ကဲ့သို့သော အမြိုးအစားဖွဈပါတယျ)
It’sasort of……………….(………………….ကဲ့သို့သော အမြိုးအစားဖွဈပါတယျ။)
ဥပမာ bungalow (တဈထပျအိမျ)ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အစဖျောမရပါက
“It’sakind ofahouse.” (အိမျကဲ့သို့သော အမြိုးအစားဖွဈပါတယျ)ဟူ၍ ပွောနိုငျပါတယျ။
စာမေးပှဲဆိုငျရာအကွံပွုခကျြမြား (အပိုငျး ၁)
စာမေးပှဲဆိုငျရာအကွံပွုခကျြမြား (အပိုငျး ၂)
စာမေးပှဲဆိုငျရာအကွံပွုခကျြမြား (အပိုငျး ၃)
စာမေးပှဲဆိုငျရာအကွံပွုခကျြမြား (အပိုငျး ၄)
စာမေးပှဲဆိုငျရာအကွံပွုခကျြမြား (အပိုငျး ၅)
စာမေးပှဲဆိုငျရာအကွံပွုခကျြမြား (အပိုငျး ၆)
စာမေးပှဲဆိုငျရာအကွံပွုခကျြမြား (အပိုငျး ၇)
စာမေးပှဲဆိုငျရာအကွံပွုခကျြမြား (အပိုငျး ၈)
စာမေးပှဲဆိုငျရာအကွံပွုခကျြမြား (အပိုငျး ၉)
စာမေးပှဲဆိုငျရာအကွံပွုခကျြမြား (အပိုငျး ၁၀)
စာမေးပှဲဆိုငျရာအကွံပွုခကျြမြား (အပိုငျး ၁၁)
စာမေးပှဲဆိုငျရာအကွံပွုခကျြမြား (အပိုငျး ၁၂)
စာမေးပှဲဆိုငျရာအကွံပွုခကျြမြား (အပိုငျး ၁၃)
စာမေးပှဲဆိုငျရာအကွံပွုခကျြမြား (အပိုငျး ၁၄)
စာမေးပှဲဆိုငျရာအကွံပွုခကျြမြား (အပိုငျး ၁၅)
စာမေးပှဲဆိုငျရာအကွံပွုခကျြမြား (အပိုငျး ၁၆)
စာမေးပှဲဆိုငျရာအကွံပွုခကျြမြား (အပိုငျး ၁၇)
စာမေးပှဲဆိုငျရာအကွံပွုခကျြမြား (အပိုငျး ၁၈)
စာမေးပှဲဆိုငျရာအကွံပွုခကျြမြား (အပိုငျး ၁၉)
စာမေးပှဲဆိုငျရာအကွံပွုခကျြမြား (အပိုငျး ၂၀)
Permalink Reply by Zaw Hteik on January 24, 2014 at 2:17
Very useful factors